Trump oo sheegay in Shiinuhu uusan doonayn in dib loo soo doorto – Radio Damal
Trump oo sheegay in Shiinuhu uusan doonayn in dib loo soo doorto
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa sheegay in Shiinaha “uu sameyn doono waxkasta oo uu awoodo” si aanan isaga dib loogu soo dooran, isagoo sare u qaaday dhaleecayntiisa ku aaddan Beijing xilli uu taagan yahay cudurka safmarka ah ee coronavirus.
Wareysi uu Aqalka Cad ku siiyay wakaaladda wararka ee Reuters, ayuu ku sheegay in Beijing ay wajahayso suuragalnimada dhowr cawaaqib oo ka imanaya dhinaca Mareykanka coronavirus awadii.
Waxa uu sheegay in Shiinaha ay aheyd in dunida uu xilli hore u sheego cudurka safmarka ah.
Mr Trump ayaa laf ahaantiisa waxaa badanaa lagu eedeeyaa inuusan wax ku filan qaban si uu cudurka u xakameeyo.
Coronavirus ayaa waxa waxyeelo wayn gaarsiiyay dhaqaalihii Mareykanka ee markii horaba aan cagaha badneyd kaas oo ahaa barta uu ka duuli jiray madaxweynaha marka ay timaado ololaha uu doonayo in bisha Nofeembar dib loogu soo doorto.
Mr Trump, oo weerrar dhanka dhaqaalaha ah ku qaaday waddanka Shiinaha, ayaanan soo bandhigan qaabka uu uga falcelin doono Beijing.
Waxa uu wakaaladda wararka ee Reuters uu u sheegay: “Wax badan ayaan sameyn karaa. Waxaannu eegaynaa waxa dhacay.”
Mr Trump ayaa waxa uu intaasi ku daray: “Shiinaha waxa uu sameyn doonaa waxkasta oo uu sameyn karo si aan ugu guuldaraysto tartanka.”
Madaxweynahan ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay inuu ruamaysan yahay in Beijing ay doonayso in ninka ay u badan tahay inay tarmaan ee Xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden inuu ku guulaysto doorashada bisha Nofeembar.
Mr Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu ka shakisan yahay xogta tilmaamaysa in Mr Biden uu guulaysan doono.
“Ma rumaysi waxyaabaha ay daabacaan kooxaha aragtida dadweynaha ka shaqeeya,” ayuu yiri madaxweynuhu. “Waxaan rumaysanahay in dadka dalkan ay yihiin kuwo caqli badan. Mana filaayo in ay dooran doonaan nin aanan waxba qaban karin.”
Warbaahinta Mareykanka ayaa gelinkii hore ee shalay waxa ay ku warrantay in Mr Trump Jimcihii la soo dhaafay ku qarxay lataliyayaashiisa siyaasadda arrimo la xiriira ra’yi dadweyne oo gudaha dalkaas laga sameeyey oo uu muujinayay inuu ku guuldarraysan doono gobolo xasaasi ah.
Lataliyayaashiisa ayaa waxa ay shaki ka muujiyeen in Mr Trump uu ku guulaysan karo gobollada xasaasiga ah ee aadka loogu baratamo sida Florida, Wisconsin iyo Arizona, halka qaar ka mid ah kooxdiisa ka shaqeynaysa dib u doorashadiisa ay ka rajo dhigeen inay ku guulaystaan gobolka Michigan, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Associated Press.
“Joe Biden igama guulaysan karo,” ayaa la sheegay in Mr Trump uu yiri, xilli uu socday shirweyne uu isugu yeeray saraakiishiisa ololaha doorashada.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale la sheegay inuu ka gaabsaday maareeyaha ololihiisa dib u soo doorashada, Brad Parscale, kaas oo looga yeeray Florida.
Waxa uu ka carooday Mr Parscale oo waxa ayba gaartay in mar uu soo hadalqaaday inuu xilka ka qaadayo, sida ay ku warramayaan CNN iyo the Washington Post, walow aanay kala cadayn heerka ay arrintaas gaarsiisan tahay.
Gelinkii hore ee Arbacada, Mr Trump ayaa sheegay inuusan cusboonaysiinayn tubta kala fogaanshaha bulshada ee xukuumaddiisa haddii uu go’aankaasi waqtiga ka dhaco maanta oo Khamiis ah.
Tusmaha oo markii hore loogu tagalay inuu socdo 15 maalmood ayaa waxaa lagu daray 30 maalmood oo dheeraad ah ayaa dadka Mareykanka waxa uu ku dhiirigeliyay inay guryaha ka soo shaqeeyaan ayna ka fogaadaan inay dad badan isugu yimaadaan, halka loogu talilyay dadka xaaladaha caafimaad qaba inay iskarantiilaan.
Kaddib muddo ka badan bil oo uu inta badan ku xayirnaa Aqalka Cad, ayaa Mr Trump waxa uu sheegay inuu qorshaynayo inuu dib u bilaabo safarrada, oo uu todobaadka soo socdo u safri doono gobolka Arizona.
Waxa uu weriyayaasha u sheegay inuu rajaynayo inuu bilaha soo socda qaban doono isu soo baxyo waa weyn oo ay ka soo qeybgalayaan kumannaan taageerayaal ah.
Mareykanka ayaa haatan waxaa laga diiwaangeliyay saddex meelood oo meel guud ahaan kiisaska coronavirus ee dunida oo dhan. Dhimashada uu cudurkaasi sababayna waxa ay ka sarraysaa 60,000 taas oo muddo lix todobaad ah ka sara martay tirada Ameerikaankii ku dhintay dagaalkii Vietnam ee socday 20ka sanadood.
Shaqo la’aanta oo todobaadyo ka hor qarka u saarneyd inay gaarto meeshii ugu hoosaysay, ayaa haatan waxa ay taagan tahay in ka badan 26 milyan.
Tirada cusub ee Arbacada la shaaciyay ayaa waxa ay muujinaysaa in dhaqaalaha Mareykanka uu hoos u dhacay ku dhawaad 5% – waa hoos u dhicii ugu darnaa tan iyo dhaqaale burkii dunida ka dhacay sanado ka hor.